कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण —ज्यापुनी इन्दु, ग्वार्को ललितपुर
संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण —ज्यापुनी इन्दु, ग्वार्को ललितपुर
विभिन्न विधामा समर्पित हुँदै भोका प्राणीहरुलाई खुवाउने कार्यको साथै संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा अतुलनीय योगदान गर्दै आउनु भएकी समाज सेवी तथा नायीका ज्यापुनी इन्दुसंगको छोटो संवाद
—सम्पदा संरक्षणको साथै निर्धा निमुखा जनताहरुको भोकमरीलाई जोगाउन सानो पाईला अगाडी बढाउने काममा लागी परेको छु ।
२.सानो पाईलाको उपलब्धी ?
—अहिलेसम्म जिर्ण भएको धेरै सम्पदालाई पुनर्निर्माण गर्ने काम भैरहेको सर्वविदितै छ । अझ जानी जानी नाश गरेको साँस्कृतिक सम्पदालाई पुनर्निर्माण गर्न बांकी छ । कहां कहां छ अध्ययन कार्य जारी छ ।
३.निर्माण कार्य थालनिको लागि अर्थ व्यवस्थापन ?
—जहाँ इच्छा, त्यहिं उपाय, सतकर्ममा लाग्न सकों भन्ने भगवानले पु¥याउँदो रहेछ भन्ने उखान मात्र नभइ सत्य सावित भएको छ । सम्पदा संरक्षण कार्य थालनी भएपछि भगवानरुपी दाताहरु पनि एक पछि अर्को पाउन सहज भयो, कार्य सम्पादनमा बाधा परेन ।
४.समाज सेवा कार्यक्रममा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ प्राप्त गर्ने मनसायले आउने गर्छन रे हल्ला सत्य हो ?
—हजुर मानव सबैको एउटै विचार नहुन सक्छ । सामाजिक काममा व्यक्तिगत स्वार्थ राख्न हुँदैन सामुहिक स्वार्थमा लाग्नु जरुरी छ । सबै मिलेर समाजमा मासिएको संस्कृति र सम्पदा निर्माण गर्नु छ । पदको लोभ वर्तमान राजनीतिज्ञलाई मात्र होइन सामाजिक संस्थामा पनि हुँदोरहेछ । हामिले जस्तै भोका नाङगा गरिव जनतालाई राहत दिने काम भैरहेको छ, गरिव जनताहरु जिउने अवसर मिलेको छ, खुसि लाग्छ ।
५.तपाई अभिनय क्षेत्रबाट संन्यास लिनु भएको ?
—सानो पाईला सफल पार्न विश्राम मात्र लिएकी, अभिनय मेरा सबैभन्दा मन पर्ने विधा हो, कहाँ त्याग्न सक्छु र ।
६.तपाईंले के के मा अभिनय गर्नु भयो ?
—टेलि चलचित्र, सर्ट फिल्म, म्यूजिक भिडीयो र नाक आदी
७.उत्कृष्टको नाउँ लिनु पर्दा ?
—सबैमा त्यतिकै मेहेनत गरेकी छु, सबै उत्कृष्ट नै लाग्छ ।
८.मातृभाषालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
—प्राणभन्दा प्यारो छ । त्यसैले नायक रुपेन श्रेष्ठ र म मिलेर नेपालभाषा उठानको निम्ती नेपालभाषा म्यूजीक भिडियो निर्माणमा सानो सहयोगको स्वरुप हाललाई नगद रु.२५२५÷ प्रदान गर्ने छौं ।
—कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक परिवार प्रति अभिवादन साथै सम्पूर्ण नेपालीको कल्याण होस, जय होस ।
Posted by kirtipur.com.np at 11:49 AM